Nepal Samaya | कोरोनाले चार महिना धकेलिएको कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट
नेपाल समय | काठमाडौं, बुधबार, भदौ ३०, २०७८
बुधबार, भदौ ३०, २०७८, काठमाडौं
काठमाडौं- कोरोना भाइरस महामारीका कारण चार महिना पर धकेलिएको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा बुधबारबाट सञ्चालन हुँदैछ। पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजीको परीक्षा हुँदैछ।
परीक्षा बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। ८ असोजसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा ३ लाख ७४ हजार विद्यार्थी छन्। परीक्षामा विद्यार्थीलाई होम सेन्टर कायम गरिएको छ, ४ हजार ३१५ वटा परीक्षा केन्द्र छन्।
गत जेठमा हुनुपर्ने परीक्षा कोरोना संक्रमणका कारण ३१ साउनका लागि सारिएको थियो। तर, कोरोना नियन्त्रणमा नआएको र जोखिम कायमै रहेको भन्दै फेरि परीक्षा सारिएको थियो।
परीक्षा बोर्ड (कक्षा ११ र १२ हेर्ने)परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार अधिकांश विद्यार्थीले खोप लगाइसकेको र संक्रमण पनि कम हुँदै गएकाले परीक्षा सञ्चालन भएको हो। -न्युज कारखाना
प्रकाशित: September 15, 2021 | 07:43:43 काठमाडौं, बुधबार, भदौ ३०, २०७८
काठमाडौं, बुधबार, भदौ ३०, २०७८
तलबभत्ता निकासा नभएपछि देशभरका ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित
स्थानीय तहले सरकारले तोकेबमोजिम ईसीडी शिक्षक (बाल विकास सहजकर्ता) र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब निकासा नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
त्रिविका कक्षाहरू आजदेखि भौतिक उपस्थितिमा सुरु हुने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले असोज १ गतेदेखि भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्‍चालन गर्न भएको छ।
त्रिविका कक्षाहरु असोज १ गतेदेखि भौतिक उपस्थितिमा सुरु हुने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले असोज १ गतेदेखि भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्‍चालन गर्ने भएको छ।
काठमाडौं महानगरका विद्यालयमा दसैंपछि मात्र पठनपाठन
महानगर शिक्षा समितिको बिहीबार बसेको बैठकले तत्काल जोखिम कायमै रहेकाले पूर्वाधारको अध्ययन गरेर विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो। भौतिक रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन भने दसैंपछि मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको सुवेदीले बताए।
काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय नखोल्न आदेश [पूर्णपाठसहित]
काठमाडौं उपत्यकामा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति‍मा विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ।
बिएड दोस्रो सेमेस्टर आईसीटी र एसएनईको नतिजा प्रकाशित [नतिजासहित]
शिक्षाशास्त्र संकाय परीक्षा महासाखाले २०७८ साउनमा सञ्चालित उक्त परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो।
भीम रावलले लिएको त्यो यु–टर्न, जसले उनलाई यता न उताको बनायो
पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चर्काएर पार्टी फुटाउन उद्यत उनै रावल ओलीको दौराको फेर समाएर एमालेमै बसेका छन्। माधवकुमार नेपाललगायतले नयाँ पार्टी खोल्दा रावल पछि हटे।
कंगोमा कुटाइ खाएका नमराजको बयानः सेनाका क्याप्टेनहरूले मलाई फुटबल बनाएर हाने
फेरि पनि मलाई हान्न आउँदा मैले हात खडा गरी 'सर! मेरो गल्ती भए सजाय दिनुस्, यसरी नकुट्नुस्' भन्दा पनि 'तँ बढी बोलिस्' भनेर मलाई सहसेनानी (क्याप्टेन) इन्द्रबहादुर थापा र सहसेनानी सुबास हुमागाई (क्याप्टेन)ले फुटबल खेलेजस्तो गरी हान्नुभयो।
अनियमितताबारे हुनुपर्ने सेनाको अनुसन्धान किन मोडियो सूचनाको स्रोततिर?
जसको जागिर गुम्यो, उनीहरुलाई ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को टोलीले बयान नलिनुले नै छानबिन कतिसम्म फितलो र पूर्वाग्रही थियो भन्ने प्रष्ट देखाउँछ।